Matory torimaso ny ankizy kely - fanamarihana sy soratra ho an'ny pirinty
Matory torimaso ny ankizy kely - fanamarihana sy lahatsoratra
Matory an-tariby matory kely ny ankizy
Fanamarihana sy hafatra matory amin'ny torimaso kely
Matory, matory, matory!
Ny ray dia miaro ny ondry,
Ny renim-pianakaviana dia nihiaka ny Bäumelein,
Misy fialantsiny ao.
Any an-danitra no hiakaran'ireo ondry ':
Ny kintana kely dia ny zanak'ondry,
ny volana, ilay mpiandry ondry.
Koa homeko ondry ianao
tsara miaraka amin'ny lakolosy volamena,
Tokony ho mpiara-milalao azy izany.
ary aza mirehareha, tahaka ny ondrivavy;
Raha tsy izany, ho avy ny alika mpiandry
ary manaikitra ny zanako.
Noten von Kinderlied Schlaf Sleep kindlein Misokatra toy ny tahirim-tsary